သင်မသိသောဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏သိလိုစိတ် 150 | Gadget သတင်း
သူတို့ကအနည်းငယ်မဟုတ် ကိုးကား o အီစတာကြက်ဥ ၏ပရိုဂရမ်မာ ဂိမ်းတွေကက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ စီးရီးများနှင့်အခြားဗီဒီယိုဂိမ်းများကဲ့သို့သောအခြားအလုပ်များကိုရည်မှန်းချက်ထားခြင်း၊ ပြောင်မြောက်စွာကစားခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ခေါင်းစဉ်များအတွင်း၌ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထည့်သွင်းထားသည်။
အခြားသူများကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါ အနည်းကိန်း မတော်တဆသို့မဟုတ်အချို့သောရှုထောင့်သို့မဟုတ်အချို့သောခေါင်းစဉ်၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏အထူးသဖြင့်မွေးဖွား။ ဒီနေ့မင်းတို့ကိုငါတို့ကမ်းလှမ်းပါ့မယ် 150 ထူးဆန်း သင်၌မသိသောအရာများပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းကစားသူများနှင့်စပ်စုလိုလျှင်စာဖတ်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြုစုထားသောစာရင်းကိုအခြေချရန်နှင့်ဖိတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည် MundiVideogames.
၁။ "GTA: San Andreas" ၏ဖွင့်နိုင်သည့်မြေပုံသည် ၄၄ စတုရန်းကီလိုမီတာခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Liberty City ၏အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၅ ဆနှင့်ဒုစီးတီး၏ ၄ ဆကျော်ဖြစ်သည်။
၂။ Megatrive 2X အတွက်ဖျက်သိမ်းလိုက်သော "Ratchet & Bolt" ဂိမ်းသည်ဖန်သားပြင် ၃၀ ရှိပြီးလက်နက် ၃၃ ခုခန့်သယ်ဆောင်နိုင်သောနောက်ဆုံးသူဌေးဖြစ်သည်။
၃။ ဘုရားသခင့်လက်တော်၏ချီဟွာဟားလူမျိုးများတွင် M_ikami's Head (Mikami's Head) ဟုခေါ်သောခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ "Resident evil" ကိုဖန်တီးသူမှကိုးကားချက်အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် 'ငါမြင်သည်ထက်ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုဆုံးရှုံးသည်' Resident Evil3သည် PS4 သို့ ported လုပ်သည်။
(၄) Pac-Man ဂိမ်းတွင်အမြင့်ဆုံးရမှတ်သည်4ရမှတ်ဖြစ်ပြီးလူငါး ဦး သာရရှိသည်။
၅။ Oddworld5 Saga တွင်“ Hand of Odd”,“ Squeek's Oddysee” နှင့်“ SligStorm” မထုတ်ဝေသေးသောခေါင်းစဉ်များစွာရှိသည်။
၆။ Sega Space ဂိမ်း“ Channel 6” သည်သူမနှင့်ဂိမ်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော Ulala အကြားတူညီမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Deee-Lite ၏အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သော Lady Miss Kier ကိုတရားဝင်စစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည်။ အလှမယ် Kier ရှုံးသည်
၇။ Sony မှပထမဆုံးရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်မှာဆန်ချက်ပြုတ်သူဖြစ်သည်။
၈။ PS8 အတွက်စက်ရုပ်လုပ်ဆောင်မှုဂိမ်း၊ “ Armored Core Nine Breaker” တွင်သင်ခန်းစာ ၁၅၀ သင်ကြားပေးထားသည်။
၉။ ထူးဆန်းဆန်းပြားတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်း cameo "The Sopranos" ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ "Alien Hominid" ပေါ်ထွက်လာခဲ့မယ်။
(၁၀) PS10 ရှိ“ RPG Metal Saga” တွင် (၎င်းကိုဥရောပ၌မထုတ်ပေးသေးပါ၊ ၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ Atlus မှဖြန့်ဝေသည်) တွင်သင်နိဒါန်းမှအဆုံးသတ်တစ်ခုကိုရယူနိုင်သည်။
၁၁။ မူလ Donkey Kong Arcade တွင်မာရီယိုကို Jumpman ဟုခေါ်သည်။ သူသည်လက်သမားမဟုတ်၊ လက်သမားလည်းဖြစ်သည်။
၁၂။ Halo ရှိ Scorpion Tanks တွင်ဂဏန်း ၆ လုံးပါနံပါတ်ကိုဖတ်နိုင်သည်။ ဤနံပါတ်သည်ဂိမ်းအနုပညာဒါရိုက်တာ Marcus R. Lehto မွေးဖွားသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ သူ၏အတိုကောက်များသည်မာစတာကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်၏ဘွတ်ဖိနပ်ပေါ်တွင်လည်းပေါ်နေသည်။
၁၃။ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွင်ပထမဆုံးတွေ့ရှိသည့်အီစတာဥကို Atary 13 မှ "Adventure" တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဂိမ်းဖန်တီးသူ၏အမည်ကိုတွေ့နိုင်သောအခန်းတစ်ခန်းပါဝင်သည်။
၁၄။ Doom 14 The ပထမလူသေနတ်သမားသည် 'the ingame' PDA တွင်ဗြိတိသျှဟာသ 'The office' ရှိရည်ညွှန်းချက်ပါရှိသည်။
၁၅။ ဂျိမ်းစ်ဆန်းဒါးလန်းတွင်“ Silent Hill 15” တွင်ပါဝင်သော Guy Cihi သည်အန္တရာယ်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပြီးသူ၏သမီးနှင့်အတူအခြားဂိမ်းအတွက်သရုပ်ဆောင်ရန်ချခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၁၆။ Final Fantasy X တွင်ပစ္စည်း ၅၀၄ ခုရှိသည်။
၇။ Michael Jackson ဟာ Sonic the Hedgehog 7၊ Ready3Rumble Round 2၊ Space Channel2and 5,1၊ GTA: Vice City နဲ့ Moonwalker မှာတစ်နည်းနည်းနဲ့ပေါ်လာတယ်။ »။
၁၈။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ Nintendo က third party ပါတီပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ဟာ Virtual Boy ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။
19. "Everybody Loves Katamari" တွင်နှင်းဆီတစ်သန်းစုဆောင်းခြင်းပါ ၀ င်သည့်အပိုဆုကြေးတစ်ခုပါရှိသည်။ ကံကောင်းတာက၊ အဲဒါကိုတစ်ခေါက်ပြီးအောင်မပြီးပါဘူး။
၂၀။ "FIFA 20" သည်ပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော (ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါ၊ ပထမဆုံး "Gran Turismo" သည်လည်း scratch နှင့် sniff CD များကိုသုံးသော) ဖြစ်သည်။ CD ကိုမြက်မှ holia ။
၂၁။ "ဒဏ္Fာရီ - ပျောက်ဆုံးသွားသောအခန်းကြီးများ" တွင် Peter Molyneux ၏သင်္ချိုင်းဖြစ်သည်။
22. Red Dead Revolver သည်မူလက Capcom ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သော်လည်းအခွင့်အရေးကို Rockstar သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
၂၃။ PS23 နှင့် Xbox အတွက် Guy Guy ဂိမ်းကိုဂိမ်းထုတ်ဝေစဉ်ကမိန်းကလေးတစ် ဦး သည်အသက်မပြည့်သေးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
(၂၄) Halo 24 သည်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Xbox ဂိမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မိတ္တူ ၈ သန်းခန့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ၎င်း၏တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်သူမှာ ၅ သန်းရှိသည့်ပထမဆုံး Halo ဖြစ်သည်။
25. "Elder Scrolls III: Morrowind" တွင်ကျွန်းသေးသေးလေးတွင်သိုလှောင်ထားသောစကားပြောနိုင်သည့်ပိုးတောင်မာရှိပြီး၎င်းသည်ရောင်းချသူလည်းဖြစ်သည်။
၂၆ 'ICO' ဆိုသည်မှာ 'go's go' အတွက်ဂျပန်စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်။
၂၇။ ဂျပန်နိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိသည့် Nintendo 27 ရှိ "Animal Crossing" တွင်ဂိမ်းကစားသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်။
၂၈။ Nintendo ၏ဥက္က,္ဌ Reggie Fils-Aime သည် Pizza Hut ရှိအမျိုးသားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Bigfoot Pizza နှင့် New Yorker တို့ကိုစတင်ခဲ့သည်။
29. Squat Braniac Raz ဟာ "Psychonauts" မှာအဓိကဇာတ်ကောင်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ အစပိုင်း၌၎င်းသည်ငှက်ကုလားအုတ်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။
Sega အတွက်“ Outrun”,“ Shenmue” နှင့်“ Virtua Fighter” စသည့်ဂန္ထဝင်များကိုမဖန်တီးမီ Yu Suzuki သည်သွားဆရာဝန်ဖြစ်လိုသည်။
၃၁။ "Tomb Raider" ၏ဇတ်ကောင် Lara Croft ကိုမူလက Laura Cruz ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
၃၂။ Nintendo သည် Mario Bros. ဖြစ်သော်လည်းမာရီယိုအားမည်သည့်နာမည်မျှပေးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ (မာရီယိုညီအစ်ကိုများ) က၎င်းသည်မာရီယိုဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
၃၃။ Asterix & Obelix XXL 33 PS2 ဂိမ်းတွင် Pac-man၊ Tomb Raider၊ "Tetris", "Street Fighter" သို့မဟုတ် "Super Mario" စသည့်အခြားဗီဒီယိုဂိမ်းများမှဇာတ်ကောင် / ခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ပါရှိသည်။ Sunshine »။
၃၄. Half-Life ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်း code name သည် Quiver (Quiver) ဖြစ်ပြီး၊ Stephen King ၏“ The Fog” ဝတ္ထုတွင် Arrowhead စစ်အခြေစိုက်စခန်းအားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
၃၅။ Dynasty Warriors ၏ပထမဆုံးဂိမ်းသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၃၆။ Gran Turismo 36 တွင်ကား ၆၅၀ ခန့်၊
'Entertainment Software Association' ၏အဆိုအရယူအက်စ်တွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကစားသမားမှာအသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီး ၁၂ နှစ်လောက်ကစားနေပြီဖြစ်သည်။
၃၈။ Nintendo ၏ဥက္ကH္ဌဟီရိုရှီယာမူချီသည် Seattle Marines ဘေ့စ်ဘောအသင်းတွင်အစုရှယ်ယာအများစုကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ယခု Nintendo ၏အမေရိကန်ခေါင်းဆောင် Howard Linciln က ဦး ဆောင်နေသည်။
Katamari ဂိမ်းဒါရိုက်တာ Keita Takahashi က Picasso နှင့် "Little Shop of Horrors" တို့ကိုသူ၏လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
40. "Final Fantasy XII" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ဒုတိယကစားသမားအားဂိမ်းတွင်ပါဝင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
၄၁။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်သည် Pain ဗားရှင်းကို Painstation ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အရှုံးသမားများအားအမှန်တကယ်ရိုက်နှက်ခြင်း၊
၄၂။ ဒေးဗစ်ဟေးတာဒ်က“ Metal Gear Solid” မှပြဇာတ်တွင်“ X-men” ဇာတ်ညွှန်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
"Elder Scrolls IV: Oblivion" ၏ disk နေရာ၏ထက်ဝက်နီးပါးသည်စကားဝိုင်းများဖြစ်သည်။
44. ပထမဆုံး GTA (E3 '97 တွင်) ဖြန့်ချိသောအခါဂိမ်းမြို့၏တစ်ဖက်မှအခြားသို့သွားရန် ၃ မိနစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်ဟုတက်ရောက်လာသူများကိုပြောခဲ့သည်။
၄၅။ "Halo 45, Metropolis" ၏တစ်ခုတည်းသောကစားသမားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဆင့်တွင်ဘောလုံးတစ်ခုအားမျက်နှာကျက်တွင်ဝှက်ထားနိုင်သည်။
'Simlish' ကိုနားမလည်နိုင်သည့်အရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ၊ ဖန်တီးသူများသည်ယူကရိန်း၊ Navajo သို့မဟုတ် Tagalog (ဖိလစ်ပိုင်) တို့ကဲ့သို့သောဘာသာစကားများကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ (Will Bright ကိုယ်တိုင်တစ်ချိန်က၎င်းသည် Navajo ကိုအခြေခံသည်ဟုဆိုသည်)
Nokia NGage အတွက်ဂိမ်းပေါင်း ၅၇ ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
48. Pikmin ဟူသောခေါင်းစဉ်သည် Shigeru Miyamoto ၏ခွေးအားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
49. Sega ၏ "Outrun ·သည်ပုံစံ (၁၉) မျိုးဖြင့်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
50. Gamecube ပေါ်တွင် "Animal Crossing" ဂိမ်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်သော ၂၉ နှစ်အထိကြာနိုင်သည်။
51. Lara Croft ၏ရင်သားများသည်ဒီဇိုင်နာ Toby Gard သည်မော်ဒယ်၏ရင်ဘတ်အားသူမရှာနေသည့်အရွယ်အစား၏ ၁၅၀% နှင့်မတော်တဆညှိယူလိုက်ခြင်းနှင့်အခြားဒီဇိုင်နာများကထိုနည်းအတိုင်းထွက်ခွာရန်ဆွဲဆောင်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
၅၂။ Japan တွင် PS52 အတွက်“ Viewtiful Joe” ကို Star Wars ၏အပိုင်း ၄ ကိုဂုဏ်ပြုသော“ အသစ်သောမျှော်လင့်ချက်” ဟုခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့သည်။
53. စစ်ပွဲ၏ God မှစစ်သားတစ် ဦး သည်တီဗွီနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်နှစ် ၅၀ ကျော်အသုံးပြုခဲ့သည့် Wilhelm Scream ကိုအသံထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည် "Metal Slug", "Lost Planet", "Scarface" နှင့် "Lego Star Wars" တွင်လည်းကြားနိုင်သည်။
54. "American McGee's, Bad Day LA" ၏ဂိမ်းတွင်မည်သည့်အင်အားအကြီးဆုံးလက်နက်ဖြစ်သနည်း။ လက်သည်းညှပ်။
၅၅။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Dreamcast အတွက်ဂိမ်း ၄ ခုကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်။
၅၆။ Master Chief ကိုအသံထွက်သောစတိဗ်ဒေါင်းန်သည်ချီကာဂိုရှိရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံအတွက် DJ ဖြစ်သည်။
57. Capcom ၏ 'Shadow of Rome' ဂိမ်းတွင်ဆီးအိမ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသောသူအားတိုက်ခိုက်ရန်အတွက် 'Urine Trouble' (အပိုဆုကြေး) ရှိသည် (ကျွန်ုပ်ကစားသည်ကအတော်လေးပျော်စရာကောင်းသည်) ။
58. အာကာသမှကွန်မြူနစ် Mutant ဟုခေါ်သောဂိမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် 2600 Atari 1982 "Space Invaders" ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်။
59. Doom ဟုခေါ်သည့်ဂုရုပရိုဂရမ်မာဂျွန်ကာမက်က Armadillo Aerospace, orbital အာကာသပျံသန်းမှုအတွက်ရည်စူးထားသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်လုပ်အားပေး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
60. "Resident Evil 2" အား N64 သို့သယ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့သည်ယခု Rockstar San Diego (Red Red Revolver ၏စာရေးသူ၊ "Midnight Club" နှင့် "Table Tennis") ဖြစ်သည်။
၆၁။ "Nintendo" သည် "ကံကောင်းပါစေသို့ကောင်းကင်သို့ချန်ထားမည်" သို့မဟုတ် "ပရဒိသုသို့ထွက်ခွာရန်ကံကောင်းခြင်း" ကဲ့သို့သောတစ်ခုခုကိုဘာသာပြန်ပါ။
၆၂. “ Final Fantasy” အား Square ၏ဖန်တီးသူနှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူဟီရိုနိုဘူ Sakaguchi ကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးငွေသားကို အသုံးပြု၍ အမည်ပေးခဲ့သည်။
63. Brentford FC ၏လက်ရှိမန်နေဂျာတယ်ရီဘတ်က "Pro Evolution Soccer" အတွက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။
64. တစ်ချိန်တည်းတွင် Pandemic မှ "Full Spectrum Warrior" ကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်အတူပိုမိုပြည့်စုံသောဗျူဟာပါသောပိုမိုပြည့်စုံသော Spectrum စစ်သည်တော်သည်စစ်တပ်အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလူထုအတွက်ပြသခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
၆၅။ ယနေ့ (၂၀၀၇) တွင်အသက် ၅၀ ကျော်အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၂၄% သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားကြပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်က ၉% နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
၆၆။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အကုန်တွင် Sony သည် PSP ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ၇ မြို့တွင်ပန်းချီရေးဆွဲသူများအားငှားရမ်းခဲ့သည်။ lawsရာမတရားစွဲဆိုမှုဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
67. PSP ဂိမ်း "Loco Roco" မှသီချင်းစာသားများကိုတမင်တကာနားမလည်သောစာဖြင့်ရေးသားထားသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုရှာမတွေ့နိုင်။ ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံးအတိုင်းအတာနှင့်တူသည်။
68. Capcom သည် Capsule Computers အတွက်တိုတောင်းသည်။
69. သူတို့ကိုသင်တွေ့ရခဲသော်လည်း Yoshi တွင်သွားများရှိသည်။
70. UK တွင် "Rayman" သည်အချိန်တိုင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံး PSX ဂိမ်းဖြစ်သည်။
၇၁။ Splinter Cell: Chaos Theory ကိုတောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဆိုးလ်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ တားမြစ်ချက်ကို ၂၀၀၆ အကုန်တွင်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
72. "Resident Evil Zero" သည် Game Sube တစ်ခုတည်းကိုသာသီးသန့်ကျန်ရှိနေသည့် RE Saga ၏တစ်ခုတည်းသော spinoff ဖြစ်သည်။
73. 'J Allard' ဆိုတာတကယ်တော့ J Allard ရဲ့နာမည်ပါ။ _James Allard မှပြောင်းလဲသွားသည်။
"Psychonauts" သည် PS74, Xbox နှင့် PC အကြားမိတ္တူပေါင်း ၉၀၀၀၀ ကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
75. "Killer 7" မှသယ်ဆောင်သောခိုများအားလုံးကိုဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်မှအမျိုးသမီးဇာတ်ကားအချို့တွင်နာမည်ပေးထားသည်။
76. Xbox 360 အတွက် "Saints Row" တွင်လိုင်စင်ရသီချင်း ၁၃၀ ကျော်ပါ ၀ င်ပြီး ၄၀ ခုမှာဂန္ထဝင်ဂီတဖြစ်သည်။
77. နယူးဇီလန်တွင် "Manhunt" ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သည်။
78. E3 2004 ၌ဂိမ်း ၅၀၀၀ နီးပါးကိုပြသသည်။ အယောက် ၁၀၀၀ သည်အသစ်စက်စက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဂိမ်းများ၏ ၁၆% ကို 'ပညာရေး' အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
၇၉။ Gran Turismo 79 ရှိကား ၇၀၀ ကျော်မှတစ်ခုစီသည်ဒီဇိုင်းနာများကိုဖန်တီးရန်တစ်လကြာသည်။
80. အမေရိကန် gameboy ဂိမ်းဖြစ်သော "Final Fantasy release Legend II" ကိုထုတ်သောအခါ Nintendo ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းသည်ဘိန်းကုန်ကူးသူများ၏ဂိုဏ်းအားငှက်ပျောမှောင်ခိုဂိုဏ်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
Mario ဂိမ်းများ၏ Chain Chomp သည်သစ်ပင်တစ်ပင်နှင့်အမြဲတမ်းချည်နှောင်ထားသော Miyamoto ၏ကလေးဘဝပတ်ဝန်းကျင်မှခွေးတစ်ကောင်အပေါ်အခြေခံသည်။
82. John Romero သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် eBay တွင်သူ၏ Ferrari ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အင်ဂျင်တစ်လုံးသည် laptop တစ်လုံးနှင့်ညှိရန်ခွင့်ပြုထားသော modification တစ်ခုရှိသည်။
83. Tom Clancy သည် Splinter Cell ရှိ Sam Fisher ၏ ၃ မျက်လုံးခေါက်ကာမျက်မှန်ကိုမျက်မှန်တပ်ခြင်းနှင့်ညဘက်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
84. "Flatout 2" တွင် circuit တစ်ခုစီတွင်ပျက်စီးနိုင်သောအရာများ ၅၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
85. Okami ၏မူလတေးသံသည်စီဒီ ၅ ခုခန့်ရှိသည်။
86. Hitman 2: Silent Assassin တွင်၊ အဆင့်တစ်ခုတွင်ဒိန်းမတ်စာသားပါသည့်ပီဇာသေတ္တာများပါရှိသည်။
၈၇။ Capcom ဂိမ်း "Hulking Steel Battalion" ၏ ၂၀၀၀ ခန့်ကိုသာလွှတ်နိုင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် Xbox ဂိမ်းနှင့်ခလုတ် ၄၀ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်သည်။
88. Xbox ကိုမူလက DirextX-box ဟုခေါ်သည်။
89. Killzone ရုပ်ပြတစ်ရုပ်ကိုထုတ်လုပ်တော့မည်။ ထုတ်ဝေသူသည်ဒေဝါလီခံရသည်။
90. "RE4" အတွက်လျှပ်စစ် sieera command ကိုသင်မှတ်မိပါသလား။ "chichis အတွက်" မီတာနီးပါးတိုင်းတာသော "Onimusha 3" အတွက် katana command ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၉၁။ ကုမ္ပဏီသို့မ ၀ င်ခင် Nintendo ၏ဥက္ကH္ဌဟီရိုရှီယာမာအူချီသည်အငှားယာဉ်နှင့် Love ဟိုတယ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည်။
92. ၁၉၇၁ ခုနှစ်“ Space Invaders” တွင်အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်တဲ့ရန်သူများကအမှားအယွင်းဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
93. အရောင်းရဆုံး Gamecube ဂိမ်း? ၆ သန်းကျော်မျှရောင်းသော "Super Smash Bros. Melee" ။
94. The Sims သည်ယူကေရှိ PC ရောင်းချမှု ၁၀ ​​ခုတွင် ၈၂ ပတ်နေခဲ့သည်။
95. "Metropolis Street Racer" အားဂိမ်းတွင်ရှိသော bug များကြောင့် Dreamcast တွင်သုံးကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
96. Forza Motorsport2ကိုဖန်တီးစဉ်တီထွင်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့သည်ဒဏ်ငွေ ၄၁ ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှစ်ခုကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
97. "Mercenaries" တွင် Han Solo နှင့် Indiana Jones နှစ်မျိုးလုံးတွင်သော့ဖွင့ ်၍ မရသောအက္ခရာများရှိသည်။
98. မက်စ် Payne ၏မျက်နှာကို Sam Lake ၏ပုံစံနှင့်ပုံစံပြုသည်။ သူသည်ဂိမ်းအတွက်ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဇာတ်လမ်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
99. "ICO" သည် PSX အတွက်ကန ဦး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် ဦး ချိုဖြစ်ခဲ့သည်
အိုင်စီဒိုအတွက်မဟုတ်ဘဲ Yorda အတွက်ဖြစ်သည်။
100. Mega Man သည်အပြာရောင်ဖြစ်သည်။ NES တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခြင်းကြောင့်အရောင်အကန့်အသတ်ရှိသောရွေးချယ်မှုရှိသည်။
၁၀၁။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး Arcade စက်သည်အရှည် ၄.၁၁ မီတာရှိပြီး၊ ၁.၈၁ မီတာဖန်သားပြင်မှအပလေးစိုက်သောခလုတ်များကဲ့သို့ခလုတ်များရှိသည်။ ၎င်းတွင်သင်သည်လှေခါးတက်ခြင်း၊ ဂိမ်း ၁၅၀ ကျော်ကစားနိုင်သည်။
102. သြစတြေးလျရှိ Xbox 360 console ကိုမြှင့်တင်ရန်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးရေပူဖောင်းပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီး ၅၁,၄၀၀ ကျော်စတင်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများအကြားသို့မဟုတ်အားလုံးသည် Redmond ကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာမသိပါ။
103. Jack the Ripper နှင့်ပတ်သက်သည့် ၁၉၈၇ ခုနှစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းသည်၎င်း၏အကြမ်းဖက်ပုံရိပ်ကြောင့် ၁၈+ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသမိုင်းတွင်ပထမဆုံးရရှိခဲ့သည်။
104. သမိုင်းတွင်စျေးအကြီးဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည့် GTA IV သည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော်ကုန်ကျခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ ယခင်သမိုင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်စျေးအကြီးဆုံးဂိမ်းမှာ Dreamcast ၏ "Shenmue" ဒေါ်လာ ၈၀ သန်းကုန်ကျပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ရယူရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
၁၀၅။ ဗီဒီယိုဂိမ်းသမိုင်းတွင်အခန်းများအများဆုံးပါသောအိမ်ကြီးသည် Ps105's "Castlevania: the Symphony of the Night" တွင် ၁၈၉၀ ခန်းပါသောခန်းမဖြစ်သည်။
၁၀၆။ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွင်တွေ့ရမည့်အရှည်ဆုံးပြဇာတ်သည် Psx အတွက် "Metal Gear Solid" မှဖြစ်သည်။ Metal Gear Rex ရှုံးနိမ့်သောအခါ ၁၅ မိနစ်နှင့် ၁၇ စက္ကန့်ထက်မကကြာသည်။ ဒီစီးရီးရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီဂိမ်းကိုဘယ်လိုကစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
၁၀၇။ ရွေးစရာများသောဇာတ်ကောင်များနှင့်ကစားရမည့်ဂိမ်းမှာ Lego Star Wars ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ၉၆ အထိထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်းအစများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်။ ရွေးချယ်နိုင်သောဇာတ်ကောင်တစ်သန်းကျော်ရှိသည်။
108. "Street Fighter 2: The Movie" သည်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုအခြေခံသည့်ရုပ်ရှင်ကိုအခြေခံသည့်ပထမဆုံးဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ယိုယွင်းဤမျှလောက်ကောင်းသောမဖြစ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းတစ်ခုကြီးမားစီးပွားဖြစ်ပျက်ကွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
109. "Mortal Kombat" သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအသက်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် ERSB ကိုဖွဲ့စည်းရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သောဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပြီးကွန်ဂရက်ဆွေးနွေးမှုများတွင်ဤဗီဒီယိုဂိမ်းကိုပင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
110. သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးသေနတ်သမားဗီဒီယိုဂိမ်းကို ၁၉၆၁ တွင်ဖန်တီးခဲ့သည်
"Spacewar!" ကိုခေါ် အဲဒါကိုနာရီ ၂၀၀ ပဲကြာတယ်။
၁၁၁။ ပထမဆုံး“ Half-Life” သည်သမိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်ပြီး၊ ဆုပေါင်း ၉၀ ကျော်နှင့်“ တစ်နှစ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း” အဖြစ်အဆင့် ၅၁ သတ်မှတ်ထားသည်။
၁၁၂။ ဗီဒီယိုဂိမ်းရောင်းချခြင်းမှတစ်ရက်အတွင်းသမိုင်းတွင်စုစုပေါင်းဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးမှာ "Halo 112" ရောင်းချမှုနှင့်အတူပထမဆုံးဖြန့်ချိသည့်နေ့တွင်ဒေါ်လာ ၁၅၁ သန်းရရှိခဲ့သည်။
၁၁၃။ အကယ်၍ ၎င်းအရစ်ကျပမာဏကိုကျွန်ုပ်တို့ရေတွက်ပါကအကြီးဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်း Saga မှာ Megaman ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ မူရင်း Nes မှသည်ယနေ့အထိ Saga တွင်ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်း ၄၃ ခုထက်ပိုသည်။
အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရသမိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးပွဲသည် "Sensible Soccer" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားပြီးစွဲလမ်းစေသည့်ကစားနည်းသည်ထိုအချိန်ကနည်းပညာအဆင့်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
115. Colin Mc Rae: Dirt တွင်ရှုပ်ထွေးသောလက်တွေ့ကျသောအသံစနစ်ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုရောနှောနိုင်သည်၊ သတိပြုရန် - 1.005.772.154.467.879.035.136 အသံ။
ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းအားလုံးဖြစ်သော Nipon Airways တွင် Pokemon အက္ခရာများဖြင့်အပြည့်အဝခြယ်သထားသောလေယာဉ်လေးစင်းရှိပြီးလေယာဉ်အမှုထမ်းများပင်ခါးစည်းများကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။
များပြားစွာကစားသော "Everquest 117" ကစားပွဲတွင် "/ pizza" ကိုရိုက်ပြီးသောအခါအိမ်မှအော်ဒါများကို လက်ခံ၍ ဂိမ်းမှ Pizza တဲပေါ်တယ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ နဂါးကိုသတ်ရန် (၃၂) နာရီကျန်ရှိနေသေး။ မထွက်ခွာလိုသူသို့မဟုတ်ထွက်မထွက်ခွာနိုင်သူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်
118. ၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်သည် ၁၉၉၁ တွင် Virtual Retinal Display ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းလေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ retina တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက်ရေးသားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးသည်မော်နီတာဖြစ်လာသည်။
၁၁၉။ တိုးချဲ့ရန်အရှိဆုံးသောဗီဒီယိုဂိမ်းမှာsquareရိယာ ၄၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသော“ Armed Assault” ဖြစ်သည်။ စကိတ်ဘုတ်ပေါ်မှဖြတ်သန်းသွားခြင်းသည်ဂိမ်းတွင်ဆုတစ်ခုရလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
120. တစ်စုံတစ်ရာသော glitches များကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့် N64 ၏ "Super Mario 64" ကိုကြယ် ၁၂ လုံးထဲမှကြယ်တစ်လုံးယူခြင်းအားဖြင့် N120 ၏ "Super Mario 70" ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်ကစားနိုင်လျှင်အနည်းဆုံး ၇၀ လိုအပ်သည်။
Ralph Baer သည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် Magnavox Oddysey ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး၎င်းသည်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးဂိမ်း console ဖြစ်လာသည်။ ခြောက်နှစ်ကြာပြီးနောက်သူသည်အီလက်ထရောနစ်ကစားစရာများတွင်လူကြိုက်အများဆုံး "Simon" (121) ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
၁၂၂။ Ta-te-ti (OXO) (၁၉၅၂) သည်စာသားအသုံးအဆောင်များရှိသည့်ဂိမ်းများတည်ရှိပြီးကတည်းကသမိုင်းတွင်ဂရပ်ဖစ်ပါသည့်ပထမဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ မှရရှိသောမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်က cathode ray ပြွန်ကို အသုံးပြု၍ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ခြင်းဂိမ်းကိုဖော်ပြသည့်အတွက်၎င်းသည်ပထမဆုံးဂိမ်းဖြစ်မဖြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်စရာအချို့ရှိသည်။
၁၂၃၃ "Pacman" ကိုတစ်ညမွေးဖွားခဲ့ပြီး၎င်းကိုဖန်တီးသူ Tohru Iwatani သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူညစာစားရန်ထွက်သွားခဲ့သည်။ သူတို့ကပီဇာကိုမှာလိုက်တယ်၊ သူကပထမဆုံးအချပ်ကိုယူတဲ့အခါမှာကျန်နေတဲ့ပုံကိုသူမြင်တဲ့အခါဇာတ်ကောင်ရဲ့စိတ်ကူးကသူ့ခေါင်းထဲရောက်သွားတယ်။
124. ဂျပန်သည် "Space Invaders" ရောက်ရှိလာပြီး fichines များတွင်အသုံးပြုသောဒင်္ဂါးပြားအမြောက်အများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ အစပိုင်းမှာတော့ဒီအခြေအနေကပစ္စည်းဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချတာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်မလုံလောက်ဘူး၊ နောက်ဆုံးတော့အစိုးရကဒင်္ဂါးပြားတွေထပ်ဖြန့်ဖြူးပြီး ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရတယ်။
၁၂၅. Pacman ၏ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကစားသမားကို Billy Mitchel ဟုခေါ်တွင်သည်။ သူသည်ဂိမ်းတွင်ရမှတ် ၃,၃၃၃,၃၆၀ ရရှိခဲ့ပြီးပထမဆုံးဘဝနှင့်အဆင့် ၂၅၅ (penultimate level) သို့ရောက်ရှိပြီးအသီးတစ်မျိုးစီကိုစားသည်။
၁၂၆။ ပထမဆုံးအကြွေစေ့လည်ပတ်သော Arcade စက်ကို "Computer Space" (၁၉၇၁) နိုဝင်ဘာလတွင် Nutting Associates မှစတင်ခဲ့သည်။ ဖန်တီးသူ Nolan Bushnell နှင့် Ted Dabney တို့၏ငွေများက Atari ကိုသူတို့ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
127. "Polybius" သည်အချိန်ကာလ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဆုံးသော Arcade ဂိမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းမိတ္တူတစ်ခုတည်းကျန်ရှိသည်။ ဒဏ္legာရီအရ Portland ရှိအချို့သောနေရာများတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောဤပဟေpိသည်အော်ရီဂွန်သည်အမေရိကန်အစိုးရမှအိပ်မက်ဆိုးများနှင့်ကစားသမားများမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။
၁၂၂။ Street Fighters အားလုံးသည်ဂိမ်းများကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ "Street Fighter 128" သည်အနာဂတ်လှုပ်ရှားမှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်၎င်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်ကီဗင်သည် Mutant သတ္တဝါများနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် United States သို့ရောက်ရှိပြီး Capcom America စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာအနေဖြင့်ကီဗင်၏အမည်ကိုကဲန်ဟုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အရွယ်မရောက်သေးသူများအားအွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကို ၃ နာရီကျော်ကစားရန်တားမြစ်ထားသည်။ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နာရီပေါင်းများစွာကွန်ပျူတာကစားနေစဉ်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကြောင့်သေဆုံးမှုများစွာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တွင်၊ World Warcraft ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်
၁၃၀။ NES "Super Mario Bros" ၏အံ့ most ဖွယ်အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များအနက်တစ်ခုမှာနံရံများကိုဖြတ်ကူး။ ရေအဆင့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Minus World or World -130 ၏ကမ္ဘာဖြစ်သည်။ မာရီယိုသည်အဆုံးသို့ရောက်သော်လည်းသူထွက်ခွာသွားသည့်အချိန်တွင်ပိုက်မှသူ့ကိုအစသို့ပို့ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ မာရီယိုသည်ကမ္ဘာ့ -1 သို့သွားလျှင်သူသေလိမ့်မည်။
131. Level 18 မှစ၍ Pacman ၏သရဲများသည်အပြာအရောင်ပြောင်းသွားသည်ကို စား၍ မစားနိုင်တော့ပါ။
Sega ၏ပထမဆုံး mascot မှာ Alex Kidd ဖြစ်သည်။
၁၃၃၃ "Pacman" ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင် Puck-man ဟုလူသိများသော်လည်းသူသည်အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မှုကြောင့် Puck နှင့် Fuck ဟူသောစကားလုံးများအကြားအင်္ဂလိပ်လိုတူညီမှုကြောင့်သူ၏နာမည်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ နှင့် garchar) ။
134. "ET" ရုပ်ရှင်၏အောင်မြင်မှုအပြီး Atari 2600 အတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကဗုံးဖောက်ခွဲမှုဖြစ်လိမ့်မည်၊ သူတို့ရောင်းချခဲ့သည့်ဂိမ်းခလုတ်အရေအတွက်ထက်များပြားသည့်အရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဂိမ်းထဲမှာကြီးမားတဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့ပျင်းစရာကောင်းတဲ့စက်ပြင်က Atari ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဂြိုလ်သားကျည်တောင့်ကိုရှာဖို့လမ်းရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူး။
မြို့ပြဒဏ္legာရီအရ Atari သည်နယူးမက္ကစီကိုသဲကန္တာရတွင် ET ဂိမ်းများကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးခြင်းကိုရှောင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူတို့သင်္ဂြိုဟ်ခံရသည်ဟုယုံကြည်ရသည့်နေရာ၌“ ဒီမှာ ET နှင့်သူ၏မိသားစုများအနားယူနေသည်” ဟုနိမိတ်ပြသည်။
၁၃၃၅ "Pacman" တွင်ဂိမ်းကိုခေတ္တရပ်တန့်ရန်နည်းလမ်းမရှိသော်လည်းအနားယူရန်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ၀ င်္ကပါတွင်းထဲ၌သရဲတစ္ဆေတစ်ကောင်မျှမရှိသည့်အခါ၎င်းမှမည်သူမျှရှာမတွေ့နိုင်သောနေရာ၌ရောက်ရှိနေသောနေရာကိုရောက်နိုင်သည်။
၁၃၃၆ "Pacman" သည်ပထမဆုံးဇာတ်ကောင်ကစားသူဖြစ်သည်။
၁၃၇။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှားပါးဆုံးဂိမ်းမှာ Nintendo ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ၁၉၉၀ ဖြစ်ပြီး NES အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်ရုံ ၁၁၆ ခုသာရှိသည်။
၁၃၃။ Zelda Triforce ၏ဒီဇိုင်းသည်ဂျပန်ပဒေသရာဇ် Hojo ၏နဖူးစည်းစာတန်းပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
139. Capcom မှအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး က Final Fight ဂိမ်းတွင်ဇာတ်ကောင်များသည်မိန်းကလေးများကိုရန်ပွဲတစ်ခုတွင်ရင်ဆိုင်ရခြင်းသည်မကောင်းသောအရသာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဂျပန်ဂိမ်းဒီဇိုင်နာကထိုဂိမ်းတွင်မိန်းကလေးများမရှိကြောင်းဖြေကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်ကသူ့ကို Poison နှင့် Roxy အကြောင်းမေးသောအခါဂျပန်လူမျိုးကသူတို့ဟာမိန်းကလေးမဟုတ်ကြဘူး၊ သူတို့ဟာလိင်ခြားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ် မိန်းကလေးနှစ်ယောက်သည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးဝတ်စုံအတွက် ၀ တ်စုံများကိုလဲခဲ့သည်။
140. Nintendo သည်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ပထမဆုံးထည့်သွင်းသူကို NES pad ပေါ်တွင်ထည့်ခဲ့သည်။ သို့သော်အလားတူထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် Mattel Intellivision ၏စနစ်ဖြစ်ပြီးလက်ချောင်းဖြင့်ဖိလိုက်သောနေရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသောရာထူး ၁၆ ခုကိုခွဲခြားနိုင်သည့် disc တစ်ခုပါဝင်သည်။
၁၄.၁ Final Fantasy VII သည် Nintendo 141 အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ Square နှင့် Nintendo တို့သည် 64-bit console ကအသုံးပြုသောဂိမ်းအရွယ်အစားကိုကန့်သတ်ထားသဖြင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး၌ Square သည် Playstation အတွက် Final Fantasy ကို 64 cds ဖြင့်လွှတ်လိမ့်မည်။
142. မူလက Lara Croft သည်လူဖြစ်သည်။
143 ps3 ၏စွမ်းအားသည်ရောဂါများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသည်။
144“ Duck hunt” တွင်သင်မကစားနိုင်တော့သည့်အချိန်နှင့်ခွေးတစ်ကောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်လှောင်ထားသောဖန်သားပြင်အလယ်၌ရပ်နေပြီးသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံရသော်လည်းသေဆုံးနိုင်သည်။
Super Nintendo ဗီဒီယိုဂိမ်း "Chrono Trigger" တွင်သူနှင့်မကိုက်ညီသောမှော်အတတ်ကို အသုံးပြု၍ သူသည်ဂိမ်းတွင်သူ၏ဒြပ်စင်သည်ရေဖြစ်သည့်အခါမီးပစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
မူရင်း "Mario" ၏တိမ်များနှင့်ချုံများသည်အတူတူပင်ရှိသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ရန်သူမှိုနှင့်မှို posta တို့၏တူညီသည်။
147. “ Asassin's creed” တွင်“ Transformers” မှ Optimus Prime နှင့်အလွန်ဆင်တူသောသစ်သားသေတ္တာတစ်ခုရှိသည်။
148 "Zelda: the occarina of time" တွင် link သည်မင်းသမီးနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါ Bowser, luigi, မင်းသမီးနှင့် "Mario 64" မှအခြားဇာတ်ကောင် ၂ ခု၏ဓာတ်ပုံများကိုပြတင်းပေါက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
149. ဟောင်ကောင်ပထမအဆင့်အပြီးသတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် "Street fighter" မှ Chun Li ကိုနောက်ခံစားသောက်ဆိုင်၌စားနေစဉ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Megaman ဟာအစကတည်းကအရောင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်“ Rainbow man” ကိုခေါ်တော့မယ်၊ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကအဲဒီနာမည်နဲ့စူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်ရှိနေပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ဂိမ်းတွေကက » သင်မသိသောဗီဒီယိုဂိမ်းသိပ္ပံပညာ ၁၅၀
ဂီတကိုကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်မလိုဘဲမည်သို့အွန်လိုင်းရောစပ်မည်နည်း